Isazisi sedeskithophu sePlaxo - Ukuvuselelwa okuvela kunethiwekhi yakho | Martech Zone
Isazisi se-Plaxo Desktop - Ukuvuselelwa okuvela kuNethiwekhi yakho
ULwesithathu, April 23, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
IPlaxo ibilithuluzi eliwusizo ngendlela emangalisayo isikhathi esithile futhi iqhubeka iba ngcono. Emasontweni ambalwa edlule ngishaye iselula yami emnyango wemoto. Bekushaya kahle, kuhlukaniswa ifoni izingcezu zomzimba ezi-2. Ngithole ifoni entsha (thola umshwalense njalo!) Ngosuku olulandelayo kodwa bengilahlekelwe yincwadi yami yamakheli.
Ngenze ukusesha okusheshayo kwezicelo zikaVerizon ngathola ukuthi babenoPlaxo njengomunye wabo. Ngiyilayishe futhi manje sengikwazi ukuvumelanisa ifoni yami noPlaxo koxhumana nabo engikukhethile. Kungisindise izinyanga zokuphendula izingcingo ngingazi ukuthi ngubani owayekolunye uhlangothi.
Manje kuza iPlaxo Desktop Notifier
Lapho abantu engixhunywe nabo nge-twitter, ngithumela kubhulogi yabo, noma ngenza ezinye izinguquko, ngithola isaziso sedeskithophu. Njengoba mina ukulandela ngokuzenzakalela ku-Twitter, I-Twhirl igcina imatasa kakhulu futhi empeleni ngiphuthelwa amanye ama-tweets avela kubantu abakwi- inethiwekhi yami.
Yize nginethoni yokuxhumana ku-LinkedIn, ngiyakuthola lokho Plaxo kuyinto eyigugu kimi ngoba igcina onke amabhuku amakheli wami (nefoni) avumelanisiwe. Anginankinga nokukhokhela insizakalo, futhi. Ingxenye yengqondo yokwazi ukuthi noma yimaphi amakhompyutha ami noma ifoni yami ingalahleka futhi ngisenayo incwadi yami yamakheli yingqondo efanele ukukhokhelwa!
Tags: shayela esenzweniubiza isenzokuchofoziweikhonsathiamabhodi we-collabspotumphumela we-grapheffectU-Lewis howes